China Garden tool voninkazo rakotra voninkazo mpamokatra sy mpamatsy | Ruiyi
Na zaridaina za-draharaha ianao na mitsimoka fotsiny, ity kitapo fandriana ity dia mety aminao.
Fiarovana sy famelomana zavamaniry: ny fihenan'ny trano fonenana dia afaka mampitombo ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanomezana tontolo mafana sy mahavelona. Izy io koa dia manakana ny vokatry ny toetrandro tafahoatra, mamela anao hamboly zavamaniry izay tsy maniry tsara eo amin'ny faritra misy anao. Afaka misafidy voankazo sy legioma mandritra ny taona amin'ny ririnina ianao.
Famafazana, fanisiana tombo-kase, hiondrika, hiondrika, fangejana, famaohana, famaohana, famaohana, fanaraha-maso, fivoriambe, fonosana, vokatra vita
Fiarovana sy famelomana zavamaniry: Ny fihenan'ny trano fonenana dia afaka mampitombo ny vokatra amin'ny alàlan'ny fanomezana tontolo iainana mafana sy mahavelona. Izy io koa dia manakana ny vokatry ny toetrandro tafahoatra, mamela anao hamboly zavamaniry izay tsy maniry tsara eo amin'ny faritra misy anao. Afaka misafidy voankazo sy legioma mandritra ny taona amin'ny ririnina ianao.
Mety amin'ny mpitia zaridaina rehetra:Na zaridaina za-draharaha ianao na mitsimoka fotsiny, ity kitapo fandriana ity dia mety aminao. Ny boaty vilany voninkazo dia mahatonga ny fambolena legioma, legioma ary zavamaniry ho tsotra sy tsy misy fihenjanana. Ampiasao ny trano fandraisam-bahiny mba hankafizanao ny fikojakojana ambany, ny hafanana sy ny hamandoana ao anatiny, ary ny bibikely sy ny biby lavitra.
Mora ny manangona:kalitao, porofo-harafesina, rakotra zaridaina vita amin'ny vovoka, fandriana plastika miaraka amina plastika ho an'ny fivoriana mora. Ny fonosana trano fonenana PE maharitra avo lenta dia azo apetraka haingana ihany koa amin'ny vatan'ny vy. Ho fanampin'izay, misy sisiny azo antoka amin'ny farany ambony sy ambany. Ny fonosana trano fonenana dia azo tehirizina mora foana ao anaty kitapo mihidy rehefa tsy ampiasaina.
Mitsitsia vola: Ny fiakaran'ny vidin'ny raokandro sy ny vokatra fambolena dia mahatonga ny sakafo ara-pahasalamana ho safidy lafo vidy. Saingy tsy voatery ho izany. Ny fitomboan'ny sakafonao manokana dia tsy mahasoa ny vatanao sy ny sainao fotsiny, fa ho an'ny kitapom-bolanao koa. Isan-taona dia azonao atao ny mividy ny sasany amin'ireo voankazo, legioma ary zavamaniry tianao indrindra, miaraka amin'ny sarany kely amin'ny fambolena!
Fiarovana feno:Ny entona fitaterana finday dia natao hiarovana ny zavamaniry sy ny famafazana anao amin'ny toetr'andro ratsy toy ny orana, rivotra ary lanezy. Izy io dia afaka mamorona tontolo iainana tsara indrindra mba hitomboan'ny zavamaniry ara-pahasalamana ary manampy amin'ny fanitarana ny vanim-potoana maniry!
Fitaovana ara-tontolo iainana PE: Mampiasa Polyethylene matevina miompana amin'ny tontolo iainana (PE) izahay. PE dia karazana resina thermoplastic vita amin'ny etilène polymerized, izay tsy misy fofona, tsy misy poizina, ary mahatohitra tsara ny maripana ambany, miorina tsara ny simika ary ny fanoherana ny harafesin'ny asidra sy alkaly .
Firafitra mafy orina:Ny trano fandraisam-bahiny dia mandray fantsona vy tubular avo lenta ho fanohanana hitazonana ny fitoniana sy ny fialofana amin'ny zavamaniry tsy ho azon'ny rivotra. Ary koa, ny harato fanohanana mavesatra dia mafy orina mba hitazomana ny lozan'ny voa, ny zava-maniry ao anaty vilany ary ireo zavatra maivana hafa hitomboan'ny zava-maniry.
Karazana Garden Greenhouse
Anaran'ny marika QLYD
Fitaovana amin'ny frame Metal
Famaranana ny frame Mifono vovoka
endri-javatra Niorina i Easilt, Eco Friendlt, Rodent Proof, Porta
ara-nofo Lamba tenona poly
Karazana metaly Steel
Voasedra ny fanerena toetra
Anarana Garden Portable 3 * 6 * 2 2mTunnel Polt Conservatory
Size 300cm * 600cm * 220cm
Fampiharana Fambolena zavamaniry sy legioma amin'ny vanim-potoana rehetra
Kaomandy manokana MANAIKY
Ary andefaso an mailaka ny sales@ruiyitools.com
Hafainganan'ny niandohany Shandong, Sina
Teo aloha: Fiara amoron-dranomasina
Manaraka: Fiara fialamboly ivelany
Kamio mixer, Sina PU Foam Wheel, Kodiarana PU, China PU Wheel, Caster Wheel, China Concrete Mixer,